98B « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 15W, 98B, KALMAEGI, TYPHOON, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 03B နောက်ဆုံး အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on November 22nd, 2012%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ လျော့ကျသွားပြီးနောက် ဆက်လက်တည်ရှိနေသည့် 03B(THREE) သည် Chennai မြို့ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၁၄ဝ ခန့်တွင် ရောက်ရှိနေပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်(ယနေ့) နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များနှင့် နံနက် ဝ၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။(ပုံတွင် ကြည့်ပါရန်)
JTWC (ဟာဝိုင်ယီ based အမေရိကန် မိုးလေဝသဌာန)မှ 03B သည် ပြန်လည်အားကောင်းလာနိုင်ဘွယ် မရှိတော့၍ FINAL WARNING ထုတ်ပြန်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုံးရရှိသည့် ရွေ့လျားမှု အခြေအနေများကို မြန်မာနိုင်ငံ မိုး/ဇလနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာနတို့မှ ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် ဒေသတွင်း . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 03B နောက်ဆုံး အခြေအနေ
One comment မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 03B, 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာတော့မည့် 98B
By mmweather.ygn, on November 17th, 2012%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၅၃ဝ နာရီမှ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့် HIGH သို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ မုန်တိုင်းဖြစ်လာတော့မည့် 98B သည် လပွတ္တာမြို့ အနောက်ဘက် ၃၉ဝ မိုင်ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၈ဝ ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ West Bengal ပြည်နယ်၊ Kolkata . . . → Read More: ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာတော့မည့် 98B
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC လာလမ်းအတိုင်း အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ပြန်ကွေ့လာသည့် 98B
By mmweather.ygn, on November 16th, 2012%
ယနေ့ (၁၆-၁၁-၁၂)နေ့လည်၁၂၃ဝ နာရီတွင် အနောက်တောင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-98B သည် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ အားကောင်းလာသည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း လာလမ်းအတိုင်း အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၇ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ပြန်လည် ရွေ့လျားခဲ့ကာ ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၉ဝ ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်း(Chennai)မြို့အရှေ့ဘက် ၇၁ဝ မိုင်ခန့်သို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ ထပ်မံရရှိသော ရွေ့လျားမှု အခြေအနေကို ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမည်။
98B 16 Nov 2012 1200Z Location: 14.7 90.7 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
. . . → Read More: လာလမ်းအတိုင်း အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ပြန်ကွေ့လာသည့် 98B
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC 98B အား JTWC မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ LOW အဆင့် သတ်မှတ်ပြီ
လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေ LOW အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း JTWC မှ ကြေငြာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ 98B သည် (၁၆-၁၁-၁၂) မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသည့် တည်နေရာမှ အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၇ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၃၇၅ မိုင်ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ်၊ ချင်နိုင်း(Chennai)မြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၆၄ဝခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး ဆက်လက်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
. . . → Read More: 98B အား JTWC မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ LOW အဆင့် သတ်မှတ်ပြီ
2 comments မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာ
နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B သည် နံနက် ဝဝ၃ဝ နာရီအထိ မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ပြီး တောင်ဘက်သို့ ပြန်လည်ချိုးကွေ့ကာ တစ်နာရီ ၄ မိုင်နှုန်း ကျော်ကျော်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
INVEST 98B သည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာမြို့၏ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် ၂၃၅ မိုင်ခန့်၊ ကိုကိုးကျွန်း အနောက်မြောက်ဘက် ၁၆၇ မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိနေပြီး ရွေ့လျားမှု အခြေအနေနှင့် အင်အားမိုမိုကောင်းလာခြင်း ရှိ/မရှိ သတင်းများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့် တင်ပြပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် 98B ၏ ဗဟို၌ . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာ
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC INVEST 98B မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျား
By mmweather.ygn, on November 15th, 2012%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B သည် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် ၁၅၈ မိုင်ခန့်၊ ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃ဝဝ ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပို့ဘလဲယားမြို့ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ၁၇ဝ မိုင်ခန့် တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၆ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနမှ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း . . . → Read More: INVEST 98B မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျား
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC INVEST 98B ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B သည် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆၃ဝ နာရီတွငေ် ရရှိသည့် NRL data များအရ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း အနောက်တောင်ဘက် ၂ဝ၅ မိုင်ခန့်၊ ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၇ဝ ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပို့ဘလဲယားမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ၁၁၅ မိုင်ခန့် တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၂၂ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
လေဖိအားနည်းဆဲလ် – INVEST 98B 15 Nov 2012 0000Z . . . → Read More: INVEST 98B ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 25W, 98B, Bay Of Bengal, South China Sea, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 98B ၄၈ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်
By mmweather.ygn, on November 14th, 2012%
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိနည်းဆဲလ် INVEST 98B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်းမရှိပဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ 98B သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကော့သောင်းမြို့ အနောက်ဘက် မိုင် ၆ဝဝ ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပို့ဘလဲယားမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၄ဝ ခန့်နှင့် ချင်နိုင်းမြို့(Chennai) အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၆၈ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၃ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။
98B 14 Nov 2012 1200Z Location: . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ INVEST 98B ၄၈ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှ 98B ဆက်လက်တည်ရှိ
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်း မရှိပဲ ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
လေဖိအားနည်းဆဲလ် 98B သည် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားခဲ့ရာမှ လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း တောင်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ချိုးကွေ့ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ၄င်း၏ လက်ရှိတည်နေရာမှာ ပို့ဘလဲယားမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၂၇၅ မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း အနောက်တောင်ဘက် ၄၃၅ မိုင်ခန့်၊ ကော့သောင်းမြို့ အနောက်ဘက် ၆ဝ၅ မိုင်ခန့် နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၇ဝဝ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှ 98B ဆက်လက်တည်ရှိ
Leaveacomment လေဖိအားနည်းဆဲလ် 98B, Bay Of Bengal, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC Older Entries »